Maxaa soo kordhiyay weerrarada lagu hayo Yurub? - BBC Somali
Maxaa soo kordhiyay weerrarada lagu hayo Yurub?
Madaxweynaha Faransiiska, Francois Hollande, ayaa maanta la kulamaya hogaamiyayaasha Kirishtanka, Muslimiinta, Yuhuudda iyo Budhiyiinta, si ay u muujiyaan iskuduubni, kaddib dilkii ay labada nin ee jihaad doonka ah ay u gaysteen baadari da' ah oo baroordiiq ku dhigayay kaniisaddiisa.
Sidoo kale waxa uu la kulmayaa lataliyayaashiisa dhanka ammaanka.
Dhanka kalana wasiirka arrimaha gudaha ee gobolka Bavaria ayaa sheegay in Jarmalka uu dalkiisa ka dhoofin doono muhaajiriinta la diido codsiyadooda magangalyo doonka, xitaa haddii dalka ay ka yimaadeen uu dagaal ka socdo.
Haddaba weerradan ugu dambeeyay ee ka dhacayay qaaradda Yurub iyo waxa la gudboon madaxda dalalkaasi, ayaannu wax ka waydiiyay Cabdiqaadir Maxamed Axmed oo deggan dalka Jarmalka kana faalooda arrimaha caalamka.
Cabdifitaax Ibraahim Cagayare oo wareystay ayaa marka hore waydiiyay dareenka bulshada reerka Yurub ay ka qabaan weerrarada ka dhacaya qaaradda?